Nyika ine tambo tambo yeMitambo yeOlympic iyo isina kuvhurwa | Ndinobva mac
Mabhanhire ane nyika mavara eOlympic Mitambo isina kuvhurwa
Iyi mhando tambo vakatoonana mumitambo yekupedzisira makore mana apfuura muRio de Janeiro Makore mana apfuura, ndezve mabhandi akasarudzika ekupemberera chiitiko cheMitambo yeOlympic nemavara enyika dziri kutora chikamu kana mamwe acho uye kuti mune ino kesi vakasara vasina kuona mwenje nekuda kwedambudziko reCCVID-19.
Tambo dzakakandwa pachiitiko ichocho Ivo vaive nemavara e: United States, United Kingdom, Holland, South Africa, New Zealand, Mexico, Japan, Jamaica, Canada, China, Brazil, Australia, Germany neFrance, mukati mayo inowedzerawo zita renyika uye hatina kukahadzika kuti zvakafanana nedzimwe nyika mune iyi kesi.
Tambo nyowani dzeTokyo Olimpiki gore rino dzaive dzakagadzirira kuenda uye sezviri pachena nekumiswa kweiyo imwechete yavakachengetwa. Zvino mamwe acho akabuda zvakare uye L0vetodream inotiratidza tambo ine mavara eJapan mune tweet:
Zvinotaridza kuti iwo mabhande akafanana atakaona makore mana apfuura uye anga akasarudzika sezvo akangotengeswa kwechinguva uye munyika maiitirwa maOlimpiki, anozoonekwa zvakare gore rinouya, kana akambobatwa. Mitambo yeOlympic musi waJuly 23, 2021.
Parizvino tave kutogutsikana kuti tIvo vese vari munzvimbo yakachengeteka kuti vatengeswe panguva yechiitiko ichi. umo zviuru zvevatambi vanobva kumativi ese epanyika vanoungana kukwikwidza menduru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mabhanhire ane nyika mavara eOlympic Mitambo isina kuvhurwa
Amazon Prime Day ichapembererwa muna Gumiguru 13 na14
Roku kuwedzera rutsigiro rweKeKKit uye AirPlay 2 gare gare gore rino